Yusuf Garaad oo Wax ka Qoray Safarada Isdabajooga ah ee Madaxweyne Farmaajo (Akhriso) | Entertainment and News Site
Home » News » xogwaran » Yusuf Garaad oo Wax ka Qoray Safarada Isdabajooga ah ee Madaxweyne Farmaajo (Akhriso)
Yusuf Garaad oo Wax ka Qoray Safarada Isdabajooga ah ee Madaxweyne Farmaajo (Akhriso)
daajis.com:- Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dalka Soomaaliya, Yuusuf Garaad Cumar ayaa maqaal dheer ka qoray safarada isdfabajooga ah ee Madaxweynaha Soomaaliya mudane, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo dalka uga baxay tan iyo markii la doortay.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa intii uu olalaha doorashada ku jiray ku dhaliilay Madaxdii isaga ka horeesay in dalka mar walbo uga bixi jireen safaro badan aan micmno ku fadhin, waxa uuna balan qaaday in uu yareyn doono safarada aan micnaha ku fadhin oo dibada ay u aadaan madaxda Soomaaliyeed.
Farmaajo ayaa 100-ka maalmood oo uu xilka hayo dalka uga baxay ilaa 8-safar uu ku tagay in ka badan 10-wadan, waxaana Madaxweynaha hada u soo baxday muhiimada dowlada ugu jirta xiliyada qaar in safaro dibada ah loo baxo.
Halkan ka Akhriso Qoraalka Wasiir Yuusuf Garaad Cumar.
Wasiirka Arimaha Dibada Somalia.